သူများယောင်လို့ လိုက်ယောင် အမောင်တောင်မှန်း မြောက်မှန်းမသိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သူများယောင်လို့ လိုက်ယောင် အမောင်တောင်မှန်း မြောက်မှန်းမသိ
သူများယောင်လို့ လိုက်ယောင် အမောင်တောင်မှန်း မြောက်မှန်းမသိ
ကျွန်မတို့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာ အခုဆိုရင် တိုင်းတပါးယဉ်ကျေးမှုများရဲ့ လွှမ်းမိုးခြင်းကို ခံနေရပါတယ် …။ အထူးသဖြင့် ကိုရီးယားကားများရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုက အဓိက အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေသလိုပါပဲ … ဘယ်နေရာပဲ ကြည့်လိုက် ကြည့်လိုက် မိန်းကလေးတော်တော်များများရဲ့ ဝတ်ဆင်မှုဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဘယ်လိုမှ မကိုက်ညီတာတွေ တွေ့ရပါတယ် … ကျွန်မလဲ လူငယ်တစ်ယောက်ပါပဲ ခေတ်မှီတာနဲ့ ခေတ်ဆန်တာကို လက်ခံလို့ရပေမယ့် ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုဟာ ခေတ်ရှေ့ကိုပြေးနေပြီးတော့ လျှပ်ပေါ်လော်လီတာကတော့ ဘယ်လိုမှ အမြင်မတင့်တယ်ပါဘူး … မြန်မာမိန်းကလေးတွေဟာ ဟီရိဩတပ္ပတရား ရှိသင့်ပါတယ် … ညစာစားပွဲတို့ တခြားဧည့်ခံပွဲတို့ ဘာတို့လို နေရာမျိုးကို ရင်ဖုံးအကျီ င်္၊ ချိတ်ထမီနဲ့ တက်လို့မရသလို ဘုရားပေါ်ကို ဘောင်းဘီတို၊ စကတ်တိုနဲ့ မတက်သင့်ပါဘူး … သူ့နေရာနဲ့ သူ အဆင်ပြေပြေ ဝတ်ဆင်တတ်ဖို့လဲ လိုပါတယ် …။ အခုခေတ်ကလဲ ပွဲလမ်းသဘင်က တော်တော်များသကိုး … အထိမ်းအမှတ်နေ့တွေအတွက် ရှိုးပွဲလုပ်လိုက်၊ အဆိုတော်မွေးနေ့မို့လို့ ရှိုးပွဲလုပ်လိုက်နဲ့ ပွဲစီစဉ်သူတွေနဲ့ အဆိုတော်တွေကတော့ ဟန်ကိုကျနေကြတာပေါ့ … ရှိုးပွဲတွေသွားမကြည့်ဖူးတဲ့သူကို ခေတ်မမှီဘူးလို့ ပြောရင် ခေတ်မမှီတဲ့အထဲမှာ ကျွန်မကတော့ ထိပ်ဆုံးကပါမယ်ထင်ပါတယ် ..။ သွားမကြည့်ဖူးပေမယ့်လည်း အင်တာနက်မှာတွေ့နေရတဲ့ ရှိုးပွဲလာ ဆယ်ကျော်သက်လေးများရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုတွေဟာ ဘုရားတရလောက်ပါတယ်။
ဟိုတလောက တွေ့လိုက်ရတဲ့ ဟစ်ဟော့ရှိုးပွဲ ကြော်ငြာ ပိုစတာတစ်ခုကြောင့်လဲ စိတ်ထဲမှာ တော်တော်လေး ဘဝင်မကျ ဖြစ်သွားမိပါတယ် … ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄)ရက်နေ့ Valentines Day ရှိုးပွဲမှာ ပထဦးဆုံးဆုံတွဲ (၅၀၀) အား ဗေဒင်တစ်ခါ ပေးမေးခြင်း၊ နှင်းဆီပန်း၊ချောကလက်များပေးပြီး အလိုက်ဖက်ဆုံး စုံတွဲများအား ပန်းချီပုံဆွဲပေး၍ dinner စားခွင့်နှင့် အခန်းများကို ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးသွားမယ်တဲ့ … ဒီကြော်ငြာ ပိုစတာကို ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှ ဘုရားတလိုက်မိပါတယ် … လူများများ လာအားပေးအောင်လို့ ဆွယ်တာလားဆိုပြီး သို့လော သို့လော အတွေးများဖြင့်ပေါ့ … ဒီလိုပွဲတွေကို အများအားဖြင့် သွားကြတာက ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်လေးတွေပါပဲ … ဆယ်ကျော်သက်လေးများကို နည်းပေးလမ်းပြလုပ်နေသလိုပါပဲ … မမှားသင့်တာတွေ မှားပြီး အတုမခိုးသင့်တာတွေ သင်ပေးနေသလိုပါပဲ … အခုခေတ် သမီးမိန်းကလေး မွေးထားတဲ့ မိဘများအတွက်တော့ ရင်လေးစရာပါပဲ .. ဒီနေ့မနက် ဖေ့ဘွတ်ဖွင့်လိုက်တော့ ကြော်ငြာက တစ်မျိုးပြောင်းသွားပြန်ပါတယ် … အခန်းတွေကို ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးမယ့် အစီအစဉ်အစား ချောင်းသာခရီးစရိတ်ငြိမ်း (အခန်းခ+စားစရိတ်+ကားခ) ၅ ဦးကို ကံစမ်းမဲများ ဖောက်ပေးသွားမည် ကံစမ်းမဲတစ်စောင်ပေါက်လျှင် (၂) ဦး သွားခွင့်ရှိသည်တဲ့ … ကုလားကြီးနဲ့ ဘာဘူကြီးအတူတူပါပဲ … ချောင်းသာခရီးဆိုတော့ ပိုတောင်လွတ်လပ်သွားသလိုပါပဲ … ဆယ်ကျော်သက်လေးများကလဲ ကိုယ့်အသိဉာဏ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်နဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချနိုင်ကြပါစေ …။ သူများယောင်လို့ လိုက်ယောင် အမောင်တောင်မှန်း မြောက်မှန်းမသိတဲ့ ဘဝမျိုး မရောက်ကြပါစေနဲ့လို့ တောင်းဆုပြုပါတယ် …။
ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄)ရက်နေ့ Valentines Day အတွက် စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ သူတွေကို တစ်ခုလောက်တော့ မေးချင်ပါတယ် … ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၃)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့အတွက်ရော ဘာတွေများပြင်ဆင်ထားကြသလဲလို့ ……
(စိတ်ထဲမှာ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်နဲ့ ခိုးလို့ခုလုဖြစ်နေလို့ ရေးလိုက်တာပါ)
ဟုတ်ပ မချစ်လေးရယ်.. တကယ်ပဲ ရင်လေးစရာပါ…. အခုဆို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ကိုသာ လူငယ်တွေသိကြတော့တယ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ကိုတော့ ရှိတယ်လို.ကိုမထင်ကြတော့ဘူးဗျာ….
ဒါပေမယ့် ဒီနေ.တော့ ကျွန်တော်တို.ရုံးဘေးက မူကြိုကျောင်းလေးမှာ songbox နဲ. ကဗျာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာမလေးက ကလေးတွေကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ မှာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ. ဆိုပြီး ပြောသွားတာ ကြားလိုက်တယ်.. တကယ်ကြည်နူးဖို.ကောင်းပါတယ်…
တကယ်တမ်း စဉ်းစားကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို.လဲ လူငယ်ပါပဲ… အဲလို အရည်မရအဖတ်မရတွေ လုပ်နေမယ့်အစား ထိထိရောက်ရောက် အကျိုးရှိရှိလေးတွေ လုပ်ကြစေချင်တယ်ဗျာ…..
ဟုတ်တယ် ရွှေတိုက်စိုးရေ … ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ကိုသာ တမျှော်မျှော်နဲ့ အဲဒီ့နေ့ကျရင် ဘယ်သွားမယ် ဘာလုပ်မယ်နဲ့ စိတ်ကူးယဉ်နေကြပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ကိုမေ့နေကြတယ်လေ …
ရွှေတိုက်စိုးရဲ့ ကွန်မန့်ထဲမှာလဲ မှားနေတယ်နော် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပါဖြစ်ရမှာလေ …
ကောင်းလိုက်တဲ့အမေးလေးဗျာ…… ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို အမှတ်တရမျိုးတွေပြင်ဆင်နေကြသလဲ???????????
အဆံရှိတော့လဲ ဘယ်လို ပျော်ရမလဲပဲ ရှာကြံစဉ်းစားနေကြတာပေါ့လေ..
ဒီမိုကရေစီအတွက်..အသက်နဲ့သွေးနဲ ့ရင်းပြီး ခုလို ရွချင်တိုင်း ရွလို ့ရအောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့..ရင်းပေးခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်
တစ်ဂယ်ဘဲ တာရားကျဖို ့ကောင်းတယ်..
အဲဒီထဲ သများမပါဘူးနော် ဘဘပေါက်ဖော်
သများက ၁၃ရက်နေ့မအားလို့ ၁၂ ရက်နေ့ကတည်းကကြိုပြီးလှူမှာ
မပါဘူးဆိုပြီး ရှိုးပွဲမှာ အရှေ ့ဆုံးမှ ကမနေနဲ ့
ပါးကြီးနဲ ့..အဲနှာခေါင်းဂျီး လူတိုင်းမှတ်မိတယ်..
ပာုတ်တယ်ဗျို့ လူငယ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ထဲမှာ BO BO ENTERTAINMENT က ထိပ်ဆုံးကပဲ ကြည့်လို့ကိုမရဘူး
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊၁၃၊၁၄ မှာ လူငယ်တွေ စိတ်အဝင်စားဆုံးက ၁၄ ရက်နေ့ဖြစ်နေတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် …
ဒေါချစ်လေး … စိတ်မကောင်းလျှင် အဲ့ဒီနေ့ ညနေ ၊ ရုံးဆင်းတာနဲ့ …. လမ်းကြောင်း မဆင်းပါနဲ့ … ဒါဗြဲ …
တိန် !!! လမ်းကြောင်းဆင်းချင်တယ် ဆိုရင်တောင် ဆင်းစရာမရှိပါ …
ဟီးဟီး … အနားမှာ မရှိလို့ မသွားတာပါဗျို့ …. လုံးဝ မရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး ဗျို့… ဟီးဟီး …
တံဆိပ်တပ်ပြီး နာတော့ဖွပြီ ….
သမီးလို မိန်းကလေးမျိုးကိုမွေးပေး သွန်သင်ပေးတဲ့ သမီးရဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို လေးစားဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်
ဒီကနေ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဟာ အလကားရထားတာမဟုတ်ပါဘူး …
ပေတရာပေါ်မှာ သွေးစွန်းခဲ့ပြီ .. အဘရေ့
သမီးရေ အဘ တစ်ချက်လောက် မရှင်းတာလေး မေးကြည့်ချင်လို့ပါ ။
” ဟီရိဩတပ္ပတရား ” ဆိုတာရဲ့ အဓိပ္ပါယ် အမှန်က
မကောင်းမှု ပြုလုပ်ရန် ရှက်ခြင်း နှင့် ကြောက်ခြင်း မဟုတ်လားကွယ် ။
” ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှု ” နှင့် သိပ်မဆိုင်ဘူးလားလို့ ။
ချွတ်ပြီး ကော့ပြ နေရင်တော့ ဟုတ်မှာပေါ့နော် ။
” အဂါရဝ ” တို့ ” မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ” တို့ ဆိုတဲ့
စကားလုံး လောက်နှင့်ပဲ သင့်တော်မယ် ထင်ရတာပဲ ။
အဘရေ သမီးဆိုလိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုတွေက အရှက်အကြောက်မရှိတော့ဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ … တကယ်လို့များ မြန်မာစာလုံး အထားအသိုနဲ့ စကားလုံး သုံးနှုန်းမှုများ လွဲမှားနေခဲ့ရင် အဘတို့လို သိနားလည်တဲ့ လူကြီးသူမများက လမ်းညွှန်ပေးပါလို့..။
လေးစားပါတယ်ဗျာ..ကျွန်တော်လည်း ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ အမှတ်တရတွေ ပျောက်ကွယ်နေတာဝမ်းနည်းပါ၏။
ဒါကြောင့် ဖတ်ထားမှတ်ထားဘူးတာလေးဒီနေရာကနေ အားဖြည့်ပေးလိုက်ပါရစေ…
ငါတို့ဗိုလ်ချုပ် 1915 ဖေဖေါ်ဝါရီ 13မှာ မွေးတယ်
13 ဂဏန်း အောင်ဆန်း
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတို့ရဲ့ စည်းလုံးမှုပြယုဂ်အဖြစ်
ရင်ခုန်အသက်ဝင်စေတဲ့ ပင်လုံပန္နက်မြေ စိုက်ထူပေးခဲ့သူ။
ကံဆိုးစေတဲ့ နတ်ဆိုးလေး 13 က
ဆေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ သွေးသစ် တစ်စက်။
ဒါဟာ …. သူ့လက်ရာစစ်စစ် ဖြစ်တယ်။
ခေတ်တွေ ပြောင်းတယ်၊ စနစ်တွေ ပြောင်းတယ်
ကာလကြာတော့ အမေ့ခံ 13 ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့။
ဒါ့ကြောင့် အဖြူထည်သက်သက်နဲ့ ရိုင်းပြခဲ့သူ။
နိုင်ငံရေးလုပ်သက် 13 နှစ်
အဲဒီ 13 ဂဏန်းက
ဆိုးညစ်တဲ့ ဖက်ဆစ်စနစ်ကို ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ထုတ်ခဲ့ဖူးတယ်။
`ရရင်ရ မရရင်ချ´ ဝါဒနဲ့ နယ်ချဲ့စနစ်ဆိုးကို မျိုးဖြုတ်ခဲ့ဖူးတယ်။
`ကျုပ်တို့ဘဝမှာ ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းရှိတယ်´ လို့
လူထုရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ကိုယ်စားလှယ်တော်
တိုင်းချစ် ပြည်ချစ် 13 ဖြစ်ခဲ့တယ်။
1947 ဂျူလိုင် 19 မှာ
အာဏာကို အာသာငမ်းငမ်း မက်မောတဲ့
ကျည် 13 ချက်နဲ့
အဲဒီ 13 ဂဏန်းပေါ့
သူ့လက်နဲ့ ကိုင်မြှောက်ပြခွင့် ရမသွားရှာခဲ့ဘူးဗျာ။
အားဖြည့်စာလေး ရေးပေးတဲ့အတွက် ကို kyeemite ကို ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ် …။
ကိုကြီးမိုက်ကိုရော၊ချစ်လေးကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကယ်ကို အဖိုးတန်ပါတယ်ဗျာ။
ကောင်းတဲ့ပို့စ်လေးပါပဲ..ဟုတ်ပ အခုလူငယ်တွေရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုက မြင်သူမရှက်၊ယိုသူရှက်ဆိုသလိုပဲ..အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေပေါ့… မလုံခြုံတာကိုပဲ ဖက်ရှင်လို့မြင်နေကြတယ်..ခက်လိုက်တာနော်
ကလေးတွေရှေ့မှာ ဂျူလိုင် 19 အာဇာနည်နေ့မှာ မီးရှုးမီးပန်းမဖောက်တော့ဘူးနော်လို့ပြောမိတော့ “အာဇာနည်နေ့က ဂျူလိုင်19 ” ဆိုတော့ “ ဝိုင်းဝိုင်းနေ့က ဘယ်နေ့လဲဟင်တဲ့ ” ……… မြတ်စွာဘုရား ဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အာဏာရူးတွေဟာ တစ်တိုင်းပြည်လုံးရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့ငမိုက်သားတွေပါလားဆိုပြီး ရင်ထဲမှာ အရမ်းကိုခံပြင်းမိပါတယ်… ကလေးကိုတော့စိတ်မဆိုးရက်တော့ပါဘူး..